Nepali Christians | Nepali Christians
About Nepali Christians
ख्रीष्टयान महासंघद्वारा मानव अधिकार आयोगलाई पनि ज्ञापन पत्र
निराजन मोक्तान l २५ कार्तिक ०७१ललितपुर । राष्ट्रिय ख्रीष्टियान महासंघ नेपालले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका माननीय अध्यक्ष अनुपराज शर्मालाई आज मात्र हरिहरभवन स्थित उहाँको कार्यकक्षमा भेटि आफ्ना चार ब ...
परमेश्वरको वचन घन जस्तो
परिचय: हामीले अघिल्लो भागमा परमेश्वरको वचन आगो जस्तो भनेर हेरेका थियौं। तर आज हामी परमेश्वरको वचन घन जस्तो भन्ने कुरालाई हेर्नेछौं। परमेश्वरको वचन घन जस्तै छ। यो हरेक मानिस जातिले बुझ्नुपर्ने महत्वपूर ...
परमेश्वरको वचन आगो
परिचय: परमेश्वरको वचन आगो जस्तै छैन र भनेर यर्मियाले यहाँ चर्चा गरेका छन्। चट्टानलाई चुर चुर पार्ने घन जस्तै छैन र भन्ने कुरा पनि यहाँ उल्लेख गरेको छ। तर आजको यस भागमा परमेश्वरको वचन आगो जस्तो भन्ने क ...
रोप्ने र कटनी गर्ने समय
यो आलेख रोप्ने र कटनी गर्ने सम्बन्धमा छ। मैले तपाईहरुलाई कसरी राम्रो खेतीपाती गर्ने भनेर सिकाउन खोजेको भने होईन्। अनि कुन समयमा के के कुरा रोप्ने भनेर तपाईलाई बताउन खोजेको पनि होईन। तर यो आलेखको शीर्ष ...
“उहाँको सामुन्‍ने पवित्र र निष्‍कलङ्क होऔं भनेर संसारको उत्‍पत्तिभन्‍दा अघिबाटै उहाँले हामीलाई चुन्‍नुभयो। उहाँको इच्‍छाको लक्ष्यअनुसार ख्रीष्‍ट येशूद्वारा प्रेममा उहाँले हामीलाई आफ्‍ना सन्‍तान हुनलाई ...
आदरणीय पाठकहरू तपाईको बाइबल मनन र अध्ययनको म हृदयदेखि कदर गर्दछु। विशेष गरेर अरूणा राई राखाली दिदी, तपाईहरू त मलाई बेरियाको मण्डलीको विश्वासी जस्तो लाग्छ, जसले “पूरा उत्‍सुकतासाथ वचन ग्रहण गरे, र ती क ...
के क्रिश्चियन धर्म फैलिनुको कारण पैसा नै हो त?
बिश्व इतिहास साक्षी छ: संसारमा आफ्नो धर्म प्रचार प्रसार नगर्ने कुनै पनि धर्म छैन । हिन्दु, बुद्ध,मुस्लिम, क्रिश्चियन अनि अरु बाकि सबैले नै कुनै न कुनै कालखण्डमा आफ्नो आफ्नो धर्म प्रचार गरेकै हुन् । कु ...
कयिन कि हाविल ?
तपाई कयिन जस्तो वा हाविल जस्तो वाइवल धर्मशास्त्र उत्पत्ति ४:१-१६ मा पहिलो मानव आदम र हव्वाबाट जन्मिएका दुइजना व्यक्ति कयिन र हाविलको जन्म भएको कुरा उल्लेख गरेको पाईन्छ। कयिन र हाविल भिन्न चरित्र र व्य ...
परिचय :हामी ख्रीष्टको सुबास्ना हुनुपर्दछ। किनकि यो हरेक विश्वासीहरुको लागि परमेश्वरको आदेश छ। आज हामीले कस्तो प्रकारको बास्ना फैलाएका छौं। आज सुबास्नाको विषयमा कुरा गर्न गईरहेका छौं। हामीले कुबास्नाको ...
ख्रीष्टियान युवाहरुको भूमिका
जुनसुकै क्षेत्रमा युवाहरुको आवश्यकता पर्दछ। युवाहरुको अपरिहार्यता यस अर्थमा कि युवाहरुमा जुनसुकै कार्य गर्ने हैसियत र सामर्थ्य हुन्छ। युवाहरुका भूमिकाले एउटा निर्दिष्ट दिशा अथवा मार्गलाई समातेर लक्ष प ...